စူပါမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာလက်ဝတ်ရတနာဖြူသော polyester လက်အိတ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုအရောင်တင်သောအမှတ်တံဆိပ် ဟွမ်မီဒါ
Microfiber polyester လက်အိတ်များ
စူပါ microfiber လက်ဝတ်ရတနာဖြူ polyester လက်အိတ် polishing ustomizable လိုဂို
အရွယ်အစား: S, M, L ကို, XL
အထုပ် - opp အိတ်တစ်လုံးလျှင် ၁ စုံနှင့်အလယ်အလတ်အိတ်လျှင် ၁၂ စုံ
အဖြူရောင် polyester microfiber လက်ဝတ်ရတနာအဖြူရောင်လက်အိတ်
ပစ္စည်း # HMD5017 နာမည် အဖြူဝါဂွမ်းအခမ်းအနားလက်အိတ်
နိုင်လွန်အတွက် 70D, 100D, 150D
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် HMD အရောင် အဖြူနှင့်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်
အရွယ်အစား S, M, L, XL MOQ 1000 အားလုံးအတွက်
အထုပ် အိတ်လျှင် ၁- ၂ တွဲ၊ ပုံးတစ်ပုံးလျှင် ၆၀၀၊ သေတ္တာအရွယ် - ၅၅ * ၅၀ * ၄၅ စင်တီမီတာ
GW စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 15-25kgs / ပုံး
ပို့ဆောင်ချိန် သိုက်ပြီးနောက်အကြောင်းကို 25-30 ရက်ပေါင်း
နမူနာအချိန် အသေးစိတ်အတည်ပြုချက်ကို 3-5 ရက်အကြာမှာ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း တစ်ပတ်လျှင် 2000 ဒါဇင်
ငွေပေးချေမှုကာလ T / T မှအမိန့်ကိုအတည်ပြုရန် ၃၀% အပ်ငွေ၊ တင်ပို့သည့်အချိန်တွင်ပေးချေမည့်ငွေလက်ကျန်
လျှောက်လွှာ စားပွဲထိုးများ၊ ရဲများ၊ ကျောင်းဂီတတီးဝိုင်းများ၊ ယူနီဖောင်းများ၊
အားသာချက် 1. အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း။
၂။ ကျွမ်းကျင်သောချည်ထိုးစက်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော်။ အရည်အသွေးနှင့်ပေးပို့အချိန်အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
4. OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
Shijiazhuang Hongmeida Co. , Ltd
HMD လက်အိတ်စက်ရုံသည်အဓိကအားဖြင့်ဝါဂွမ်းလက်အိတ်၊ နိုင်လွန်လက်အိတ်၊ သိုးလက်အိတ်များ၊
စက်ရုံကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတို့အတွက်အားအင် ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ကျေးလက်ဒေသတွင်တည်ရှိပြီးအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်မှာနိမ့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းမှာအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်ဖြန့်ဝေရန်အချိန်သေချာပါသည်။
# အခမဲ့ဒီဇိုင်း / အနုပညာဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်း
# 100% ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
# 100% အချိန်မီတင်ပို့မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ငွေပေးချေမှုအကာအကွယ် # 100%
MOQ အသေးစား - စတင်ရန် 500pcs
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အဖွဲ့တွင်လူ ၂၀ ကျော်ရောင်းအားရှိသည်။ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျပန်၊
၄။ Company Soul: ပထမ ဦး စွာဖောက်သည်၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး
ဖြေ။ ။ သင်၏အမှတ်အသားများကိုလက်အိတ်ပေါ်တွင်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
2.Q: MOQ ကဘာလဲ။
A: MOQ မတောင်းဆိုပါ။
A: အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ SM, MD, LG, XL
A: ပုံမှန်အားဖြင့်နမူနာအချိန်သည် ၃-၄ ခန့်ရှိသည် သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်နမူနာသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသာပေးချေပါမည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်သင်၏အမှာစာကိုရရှိနိုင်သည်ဆိုပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည်သင့်ကိုပြန်အမ်းမည်။
B: အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခဲအချိန်သိုက်ပြီးနောက်အကြောင်းကို 30-35 ရက်။
A: Paypal, Western Union, Money gram နှင့် T / T အတွက်လက်ခံနိုင်သည်။ အသေးစားအမှာစာအတွက်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့် ၃၀% အပ်ငွေနှင့်ကြီးမားသောပမာဏအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ၇၀% ချိန်ခွင်လျှာညှိထားပါ။
A: ကြီးမားသောရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း, လေကြောင်းဖြင့်သို့မဟုတ်အမြန်လျှင်သေးငယ်တဲ့အမိန့်အရေအတွက်အားဖြင့်။ FedEx, DHL နှင့် TNT တို့တွင် VIP အကောင့်များအပြင်၎င်းတို့မှအထူးလျှော့စျေးရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကုန်ပစ္စည်းများကို Express မှသင့်ထံပို့စေလိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငွေစုရန်နှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
A: အော်ဒါမှာယူစဉ်ပစ္စည်းနှင့်နမူနာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကျပန်းနမူနာကိုရွေးသည်။ မတူညီသောနမူနာများကိုထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင်ပို့နိုင်သည်။
ထည့်ပါ - No.553 Taihua လမ်း၊ Shijiazhuang, Hebei
အီးမေးလ်: ketty (at) hmd-gloves.com
နောက်တစ်ခု: OEM / ODM China Transparent Disposable Plastic Gloves LDPE Poly Food Polyethylene Disposable PE Plastic Gloves